ओलीनिकट ४ नेताले यस्तोसम्म गरेपछि एमाले महाधिवेशनमा लफडा, कसले के भने ? — Imandarmedia.com
ओलीनिकट ४ नेताले यस्तोसम्म गरेपछि एमाले महाधिवेशनमा लफडा, कसले के भने ?
चितवन । नेकपा एमालेको चितवनमा जारी १० औँ महाधिवेशनका क्रममा निर्वाचित हुने ३०१ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट ४ जना नेताहरुले अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका छन् ।
शनिबार बन्दसत्रले केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार ओलीलाई दिएको थियो । ओलीले गृहकार्य गरेर सूची तयार पार्न आफू निकट ४ जना नेताहरुलाई जिम्मा दिएका थिए ।
विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची बनाउने जिम्मेवारी दिएका थिए । उनीहरुले ओलीलाई सूची बुझाएका छन् । उनीहरुले पदाधिकारी र सदस्यको सूची बनाएर ओलीलाई बुझाएका हुन्।
ओलीले सो सूचीलाई अन्तिम रुप दिएपछि बन्दसत्रमा पेश गर्ने जनाइएको छ । बन्दसत्र अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । अब ओलीले अन्तिम रुप दिने र बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
नामलिस्ट तयार पार्नेबहरुले ओलीनिकट मान्छेहरु मात्रै हालेको भन्दै महाधिवेशनमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बिहान १० बजेदेखि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा सहमतिका लागि भन्दै बन्दसत्र रोकिएको छ ।
यसैबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली तयार पारिरहेको कुरा सार्वजनिक भएका बेला अर्कोतिर अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि ओली निकट नेताहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ र ईश्वर पोखरेलले दाबी गरिरहेका छन् ।
बन्दसत्र ढिलाइ हुनुको कारण र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गरेको दाबीबारे एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले के भने ? उनकै शब्दमा जस्ताको त्यस्तै:
”केही भएको छैन त कहाँबाट छोडेको र नछोडेको भन्ने प्रश्न आयो । कुरा जहाँ छ त्यहीँ छ । त्यो विषय थाहा भएन । मैले दाबी छोडेको छैन । सबै दाबीको सन्दर्भमा अध्यक्षले छलफल गरिराख्नुभएको छ ।
अध्यक्षसँग धेरैको कुरा भयो । मेरो सिधै कुरा नभएपनि यो सबै समग्र परिस्थितिको बारेमा उहाँलाई जानकारी छ । त्यो चाहिँ थाहा भएन । तर विभिन्न समस्याको सन्दर्भमा विभिन्न खालका कुरा आउने गर्छन् । यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि भनेर ।
जहाँसम्म मेरो हकमा कुरा छ मेरो पहिला जे थिएँ सर्वसम्मति गरौं । त्यसका लागि अग्रिम भागमा उभिएको मान्छे म हुँ । त्यसपछि त्यो पद थपियो । केन्द्रबाट पास भयो । अब त्यो सर्वसम्मति गर्ने कुरा अन्तिमसम्म कोसिस गर्दा नि भएन भने चुनाव हुन्छ । चुनाव हुँदा पनि मेरो कुरा अस्ति नै भनेको छु ।
साथीभाइहरूले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्नु भनेका छन् । त्यो म निर्णय गर्छु ठ्याक्क त्यै बिन्दुमा हो मेरो कुरा । अहिले मैले नाइँ पनि भनेको छैन हुन्छ पनि भनेको छैन । कुरा त्यै हो । अहिले भर्खरै सूचना ७ बजे आ-आफ्नो ठाउँमा गएर खाना खाएर आउने र बन्दसत्र सुरु हुन्छ भन्ने खबर जानकारी पाएर म बस्ने ठाउँमा छु ।
उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अघि भर्खरै त्यहाँ बन्दसत्र भित्र उहाँसँग भेट भएको थियो । उहाँले सबै कुरा बताउनुभयो । उहाँसँग मेरो राम्रो कुरा हुन्छ सधै ।
आज पनि राम्रो कुरा भयो । उहाँले आफ्नो यहिँ कुरा हो भन्नुभयो । मैले पनि आफ्नो कुरा यो हो (वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी) र यो कुरा अध्यक्षहरू (बन्दसत्रको अध्यक्षता गरिरहेको अध्यक्षमण्डल)लाई राखेको छु र अब पनि राख्छु भनेको छु । उहाँको कुरा विधान र प्रक्रिया बमोजिम जानुपर्छ भन्ने छ ।
विधान र प्रक्रिया मूल कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छे मेरो त सदार्वदा यहि भनाइ हो । राजनीति कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु ।
अध्यक्ष ओली पनि यहिँ कुरामा हुनुहुन्छ । विधान र प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा उहाँले त्यो हो भने एकदम राम्रो म प्रक्रियाको पक्षमा छु भन्नुभएको थियो । प्रक्रियाबमोजिम अगाडि बढौं भन्ने उहाँको कुरा । मेरो कुरा पनि प्रक्रियाबाट अगाडि बढौं भनेको छु । अध्यक्षसँग पनि यो कुरा राखेको छु र उहाँले पनि त्यै कुरा राख्नुभएको छ ।”
नारायणी नदी किनारमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम सकिएकै दिन शुक्रबार राति अबेर सौराहामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । आधा रातमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या थप्ने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि हलबाट गोकुल बास्कोटाले अध्यक्षको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाए ।
‘गोदावरीको विधान महाधिवेशनमा विधान बनाउने नेतृत्व तपाईंहरु नै हुनुहुन्थ्यो, यही केन्द्रीय कमिटी हो । त्यसयता परिस्थितिमा के फेरबदल आयो र अहिले विधान संशोधन गर्नुपर्‍यो ?’ केन्द्रीय सदस्य बास्कोटाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गरे, ‘यी पदहरू थप्नुपर्ने कारण के हो ? मान्छेको अनुहार हेर्दै पद थपेर कसरी असन्तुष्टिको समाधान हुन्छ ?’
बास्कोटाको प्रश्नको जवाफमा ओलीले बैठकमा भने, ‘कमरेड गोकुल बास्कोटालाई बताउनैपर्ने भो । गोकुल बास्कोटाले सुन्ने गरी भन्छु, परिस्थितिमा काफी फेरबदल आयो । नारायणीको किनारमा त्यत्रो मान्छे उपस्थित भए । पुलिसले भनेको ७ लाख, केही मिडियाका मान्छेले मलाई सुनाए ८ लाख, स्थानीयको अनुमान छ १० लाख । यत्रो उत्साह आएपछि परिस्थितिमा फेरबदल आएन ?’
ओलीको जवाफमा बास्कोटाले चित्त बुझाएनन् । उनले फेरि उभिएर सोधे, ‘यी पद थपेपछि हामीले के बुझ्ने ? अब सहमति भयो हैन त ?’
फेरि ओलीले भने, ‘गोकुल बास्कोटालाई चित्त बुझेन जस्तो छ, सुवास (नेम्वाङ) जी, चित्त बुझ्यो हैन तपाईंलाई ?’ सुवास नेम्वाङ बोलेनन् । ओलीले भने, ‘कुरा बुझियो बास्कोटाको, अब बस्नोस् ।
बास्कोटाले हलबाट भने– मेरो अर्को पनि प्रश्न छ । ओली– चित्त बुझेन ? बास्कोटा– बुझेन । ओली– माथिमात्रै मिलायौ, तल पनि चाहिन्छ भन्या हैन ? बास्कोटा– हो । ओली– ल, त्यसोभए तल (केन्द्रीय सदस्य) को पनि थपियो । अब त चित्त बुझ्यो होला नि ?
बास्कोटा– खै, मलाई त अझै लागेन । यसको आशय भोलि सहमति हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ । ओली– अब त भयो नि हैन सुवासजी ? पदाधिकारी थपिएकोमा चार नेता असन्तुष्ट
शुक्रबार रातिको सो बैठकमा बास्कोटाले जस्तै विशाल भट्टराई, रामेश्वर फुयाँल र हिकमत कार्कीले पनि सहमति खोज्ने नाममा पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
असन्तुष्ट चार नेतामध्येका एकले भने, ‘पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्दा भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई मनाउन सकिन्छ भन्ने ठेक्का विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले लिएको कदेखियो । अब उनीहरू सहमतिमा आएनन् र भोटिङमा जानुपर्‍यो भने यसको जवाफ ठेक्का दिनेहरूले दिनुपर्छ । अहिले दुई दिनसम्म लम्बिइसकेको छ, ज–जसले मिलाउने जिम्मा लिएका छन्, उनीहरूले त मिलाउनुपरो नि । अब सहमति भएन भने भोलि चुनाव हुन्छ, कुरो यही हो ।’
ती नेताले भने, ‘अहिले उपमहासचिव पनि दुईवटा थपिए । घनश्याम भुसाल पहिले पनि उपमहासचिव नै थिए, त्यसैमा बस्न त मिल्यो नि, घट्न पो मिलेन त । यसरी नेताको मुख हेरेर पदाधिकारी बनाउने भएपछि त सहमति हुनुपर्‍यो नि । नभए किन पदहरू थप्ने ?’
केपी ओलीकै निकटमा रहेका ती नेताले भने, ‘हामीले सहमतिकै विरोध गरेका होइनौँ, तर कसैलाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा विधान नै संशोधन गरेर पद सिर्जना गर्नुभन्दा जबज अनुसार प्रतिस्पर्धामा जाँदा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मत हो । अब पद थप्दा पनि सहमति जुटेन र चुनावमा जानुपर्‍यो भने यसको जिम्मेवारी विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ लगायतले लिनैपर्छ ।’
तर, पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्ने निर्णयको भीम रावललेसमेत विरोध नगरेको भन्दै ती नेताले रावलप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘पदाधिकारी थप्ने निर्णयको रावलले विरोध गर्नुपर्ने थियो, तर गरेनन् । मेरा लागि पद थप्नुपर्दैन भने उनले भन्दिएको भए कति मजा हुन्थ्यो !’